Coral Velvet / dhogorta-dhogorta dhogorta-Shaoxing Dareemo Cirbadda Dharka Co., Ltd.
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Product>Winter>dhogorta dhuxusha
Dharka dhogorta leh waa nooc cusub oo dhar ah, sababtoo ah midab leh, dabool dheeri ah ayaa aad u sarreeya, sidaas darteed magaca dhogorta dhogorta leh. Sababtoo ah maaddooyinka ceyriinku waa fiber-ka polyesterka, sidaa darteed qaabdhismeedku waa mid jilicsan oo dheeraad ah Marka la eego noocyada kala duwan ee tartanka dharka, dhogorta dhogorta leh ayaa loo roonaaday macaamiisha faa'iidooyinkeeda nuugista biyaha wanaagsan, ma aha wax fudud oo wax lagu shubo, ma aha daadasho timo fudud iyo hawo wanaagsan.
Dharka jilicsan: Sida magacu tilmaamayo, waa dhar u eg meeraha, fiilooyinka ayaa u jilicsan sida dhuxusha. Qalabkeeda ceyriin waa microfiber polyester, sababtoo ah fiilada wanaagsan, sidaas darteed waxay dareemeysaa mid aad u jilicsan oo jilicsan, ma fududa in la libdho, ma fududa in la daadiyo.
Felvel Coral waxay leedahay midabbo hodan ah iyo nuugid biyo xoog leh, taas oo sahleysa in la nadiifiyo, laakiin waxay u nugul tahay korantada ma guurtada ah.
Markii jilif jilicsan uu soo ifbaxay, goobtiisa horumarineed waxay kaliya diirada saartay qolka qubeyska, tuwaalada qubeyska iyo alaabada kale ee qubeyska Horumarinta tikniyoolajiyadda iyo tikniyoolajiyadda, iyo qiimaheeda oo hooseeya awgeed, alaabooyinka jilicsan ee jilicsan ayaa ku soo qulqulay suuqa: galoofyada, dacasyada, garbasaarrada iwm. Iyada oo ay saameyn ku leedahay mabda'deeda tolidda, dhogorta dhogorta leh ayaa lumin doonta timaheeda markay xiran tahay, waana sahlan tahay in la helo koronto joogto ah Sidaa darteed, dadka xasaasiyadda ku leh maqaarka waa inay ka fogaadaan dharkan oo ay xirtaan wax ka yar markay cimiladu qallalan tahay.
Sherpa dhogorta dhalaalaya
Flannel leh daabacaadda dharka